Fifa oo damacsan iney kordhiso kooxaha koobka adduunka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Fifa oo damacsan iney kordhiso kooxaha koobka adduunka
La daabacay tisdag 10 januari kl 16.25
!6 kooxood oo hor leh in lagu daro hor-yaalka
Guddoomiyaha ururka kubbadda cagta adduunka, Fifa. sawir: sAWIRLE: MICHAEL BUHOLZER
Hoggaanka ururka caalamiga ee kubbadda cagta ayaa maanta Haa ugu coddeeyay in kor loo qaado tirada kooxaha horyaalka adduunka ee kubbadda cagta sannadka 2026 lana gaarsiiyo 48 halka ey iminka yihiin 32 kooxood.
Go’aanka hoggaanka sare ee kubbadda cagta adduunka ayaa maanta lagu gaarey magaalada Suurikh. Go’aankaasina oo macnihiisu yahay in hor-yaalka kubbadda cagta adduunka lagu daro 16 kooxood sannadka 2026. Iyada oo waddammada ka qeyb qaadaneya is reereebka loo qeybin doono 16 Garuub oo midkiiba ka kooban yahay saddex kooxood. Guddoomiyaha ururka kubbadda cagta adduunka Fifa, Gianni Infantino, ayaa hor-boode ka ahaa fikirkan, iaydoona uu ku guuleeystay in lagu ayido.
Shir-waynaha ururka Fifa ee bisha maajo ey isugu iman doonaan 211 waddan ee xubnaha ka ah ayaa go’aanka kama dambeeysta ah ee tirada kooxaha ka qeyb qaadan doona hor-yaalka kubbadda cagta adduunka lagu gaari doonaa.
Richard Henriksson, oo ka howl-gala SR, laanta ciyaaraha ee Radiosporten ayaa u arka go’aanka lagu kordhiyey tirada kooxaha mid aan wanaagsaneyn.
– Waxay ila tahay in aannu ahayn go’aan wanaag-san dhinac walba oo laga eego, marka laga reebo dhaqaalaha dheeriga ah ee ku soo dhici doona ururka Fifa, haddii uu xiisahaasiba uu jiro. Waxaa aaminsanahay in horyaalka kubbadda cagta adduunka uu ka dheefeyo inaan si sahlan lagu soo gelin.
– Midda kale oo caqabadda leh waxay tahay garuubyadan ka kooban saddex-saddexda kooxood, middaasina oo dhalin karta xaalado aan wanaagsaneyn iyo in kooxdu u ciyaarto un sidii ey ku soo bixi lahayd iyada oo kooxdii saddexaad oo aaney ciyaari u dhinneyn ay dibadda joogto.
Hayadda wararka ee AFP ayaa sheegtay in ururka Fifa uu nidaamkaa ka faa’iidi doono macaash dheeri ah oo lagu qiyaasey 65 milyan ee lacagta euro-ga kolka loo barbar-dhigo hor-yaalka kubbadda cagta adduunka ee ka dhici doona dalka Ruushka sannadka foodda innagu soo haya ee 2018. Guud ahaan waxaa laga hadleyaa macaash gaarsii-san 13,6 bilyan ee koronka iswiidhishka kolka lagu daro miisaaniyadda ka soo gasha xayeeysiinta.
XAQIIQ hor-yaalka 2026
48 kooxood halka iminka ey yihiin 32.
16 garuub oo midkiiba uu ka kooban yahay saddex kooxood, iyadoona labada ugu dhibcaha badani ey garuubka ka soo baxeyaan.
80 ciyaarood ee horyaalka, halka ey iminka ka yihiin 64.